Faux für rog, faux für Kapetị, faux ajị atụrụ rog, ajị rog - Wenwen
ajị atụrụ ajị anụ
Ajị atụrụ Rugs N'ihi Car Seat
Agba Steel efere
Omenala Multi-ụkpụrụ Agba efere
Ball valvụ usoro
Lelee valvụ usoro
Gate valvụ usoro
Globe valvụ usoro
Ball ọgwụgwụ / mgbe hex isi
Atụrụ akpụkpọ kapet rog
China Nlụpụta N'ogbe Ezigbo Australian ...
Ahaziri oyi okomoko Real Long für Sheepsk ...
Home mma faux ajị atụrụ ajị anụ rog High qua ...
Hebei Wenwen Trade Co., Ltd. bụ ihe mwekota ụlọ ọrụ gụnyere mmepụta, ahịa, mbupụ, anyị ụlọ ọrụ nakweere a oge a na enterprise management usoro na ọkachamara mba ọzọ ahia otu, ịgbaso ihe "iguzosi ike n'ezi dabeere, ahịa mbụ" a ụkpụrụ nke ọrụ, ngwaahịa e exported na Amerika, Australia, Europe, Middle East, Southeast Asia, Africa, karịa mba 40 na mpaghara, ndibọhọ ọtụtụ ndị ahịa otuto na ntụkwasị obi na ike a ogologo oge azụ ahịa mmekọahụ nke cooperation.Our ụlọ ọrụ nwere aghọ otu n'ime ndị obodo na-eduga ụlọ ọrụ na mere pụtara ìhè onyinye mmepe nke obodo aku na uba. Anyị nwere ike inye OEM ọrụ.
Ejiji na-ekpo ọkụ na-ere eco friendly ejiri mee ajị kapet
White siri chaise longue ajị atụrụ fom ...
N'ogbe Australia ajị atụrụ otu dum ibe s ...
Real akpacha agiri ajị ajị atụrụ Car Seat pad
Real ajị atụrụ ajị Car Seat
Universal Full Set Long für ajị atụrụ Car Seat ...
Large size ọcha ajị wuru lambskin ogologo ...
A plush ákwà na anya dị ka anụmanụ na ajị anụ. Villi na-kewara abụọ n'ígwé, na mpụta oyi akwa bụ ìhè na oké ogologo bristles, na n'ime oyi akwa dị mma na juu obere eriri. Ru ajị anụ na-ejikarị na uwe, uwe linings, okpu, n'olu, ụmụaka, matarasị, ime decorations, na kapet. The n'ichepụta ụzọ na-agụnye-akpa (weft knitting, ogologo-akpa na kpachie) ákwà. The akpa weft akpa usoro bụ kasị-eto eto ma ndị kasị n'ọtụtụ ebe ...
The akara warara akàrà otu ụdị ihe, na-eme ya adịghị mfe na-emeghe, ọ na-ekere òkè na ujo absorption, waterproof, ụda mkpuchi, okpomọkụ mkpuchi, ájá mgbochi, na fixation. Seals na-mere nke roba, akwụkwọ, metal, plastic na ọtụtụ ndị ọzọ ihe. Ebe ọ bụ na 1980s, roba akara ibe e etinyere ụgbọala, ụzọ na windo, oche, friji, containers na ndị ọzọ ọrụ. Dị ka chọrọ nke dị iche iche ọrụ, ha mepụtara ihe pụrụ iche ...
The freeway guardrail emi esịnede abụọ corrugated ígwè guardrails na abụọ posts fixedly clamped n'etiti abụọ. The abụọ posts na-clamped n'etiti abụọ corrugated ígwè guardrails. Mgbe okporo ụzọ bụ na nkịtị ọrụ, nke guardrail nwere ike mfe etinyere n'ime tupu arụnyere ntinye oghere na oghere na-echebe ma na-anọrọ na guardrail si n'èzí okporo ụzọ. Ọ bụ edo na ndị mara mma. Mgbe ụgbọala agaa kụọ ya, n'ihi na corrugated ígwè guardrail nwere ezigbo imp ...
Agba ntekwasa board
Cai Tuban, makwaara dị ka agba efere, agba efere. The agba ntekwasa ígwè efere ka nke oyi-akpọrepu ígwè efere na galvanized ígwè efere dị ka a mkpụrụ, doro elu pretreatment (degreasing, nhicha, chemical akakabarede ọgwụgwọ), ntekwasa site a na-aga n'ihu usoro (ala mkpuchi usoro), butere na mma Products . The ntekwasa ígwè efere nwere ìhè arọ, mara mma anya ọma corrosion eguzogide, na pụrụ ozugbo esichara. Ọ na-enye a ọhụrụ ụdị nke ngwaọrụ ...
Dị ka ọnụ ọgụgụ site Hebei Metallurgical Industry Association, si January na February 2018, isi ego nke nchara ụlọ ọrụ na Hebei Province bụ 156.106 ijeri yuan, a afọ-on-afọ-abawanye nke 5.03%, aza ajụjụ maka 27.67% nke ógbè isi ulo oru azụmahịa ego; uru bụ 9,84 ijeri. Yuan, onye na-abawanye nke 53,76% afọ-on-afọ, aza ajụjụ maka 30,47% nke ógbè nke ulo oru uru. Na January-February oge, isi azụmahịa ego ma ...
Adress: Mba 008 Guangzong County Industrial Park, Xingtai, Hebei, China
Ekwentị: + 86-319-8280015